अन्तरिक्षबाटै ‘बैंकिङ अपराध’ - Nepal Bizz
अन्तरिक्षबाटै ‘बैंकिङ अपराध’
Posted on ११ भाद्र २०७६, बुधबार १५:४४ Author admin	Comment(0)
न्यूयोर्क : अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा बदमासी गर्न सकिन्छ ? अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री एन म्याकक्लेन उहींबाट उनका पूर्वपतिको बैंक खाता चलाएको अभियोग खेपिरहेकी छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) ले यसको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। र, उनले यसलाई स्वीकारेकी पनि छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट पूर्वपतिको बैंक खाता हेरेको तर कुनै गलत नगरेको म्याकक्लेनले न्युयोर्क टाइम्सलाई बताएकी छन्। पूर्वपति समर वोर्डेनले फेडेरल ट्रेड कमिसनमा यसबारे उजुरी गरेका छन्।
सन् २०१८ डिसेम्बरमा अन्तरिक्ष यात्रामा निस्किएकी म्याकक्लेन ६ महिनामा पृथ्वी फर्किएकी थिइन्। उनले वोर्डेनसँग छोरा हुर्काउन यथेष्ठ पैसा रहे÷नरहेको निचोडमा पुग्न खाता हेरेको बताएकी छन्। सन् २०१४ मा विवाह गरेका उनीहरूले २०१८ मा सम्बन्ध विच्छेद गर्न निवेदन दिएका थिए।
नियमअनुसार जुन देशको अन्तरिक्षयात्रीले अपराध गरेको हो, त्यही देशको कानुन लागू हुन्छ। यसअघि यस्तो कुनै अपराधको घटना भएको छैन। प्रमाणित भएमा म्याकक्लेन पहिलो ‘अपराधी’ हुनेछिन्। – बीबीसी
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा विवादास्पद निर्णय नगर्न, सहमतिमा सतर्कता अपनाउन र ऋणमा नपर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले दिएको सुझाव अर्थपूर्ण छ
Posted on २४ आश्विन २०७६, शुक्रबार ११:४४ Author admin
बिचार :- चन्द्रशेखर अधिकारि लामो पर्खाइपछि हिमालपारिको छिमेकी चीनबाट उच्च तहको भ्रमण हुँदै छ। शनिबार साँझ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौं ओर्लने कार्यक्रम छ। चीनका राष्ट्रपति २३ वर्षपछि नेपाल आउन लागेका हुन्। यसअघि जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण र अधिक सहकार्य रहेको छिमेकी भारतको भ्रमणपछि उनी काठमाडौं आउनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ। […]
बैंक तथा बिमा समाचार
तपाई साना तथा मझौला व्यवसाय को विस्तार मा हुनुहुञ्छ भने जानुस ग्लोबल आइएमई बैंकमा तीन दिनमै कर्जा पाइने ।
Posted on ९ भाद्र २०७६, सोमबार १२:३४ Author admin
लगानी लाइ तिब्र रुपमा बिस्तार गरिरहेको ग्लोबल आइएमई बैंक (GBIME ले ३ दिनभित्र नै साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्न चाहने तथा गरिरहेका व्यवसायीलाई मध्यनजर गर्दै साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जा (एसएमई लोन) योजना ल्याएको जनाएको छ। साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जा लिन चाहने […]
उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने पक्की पुल सम्पन्न, दोहोरो ट्र्याक खुल्ला
Posted on १० भाद्र २०७६, मंगलवार ०७:१७ Author admin
मुस्ताङ : वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको छुसाङस्थित मुस्ताङ गेटको कालिगण्डकी पक्की मोटरेबल पुल सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । पुलको कालिगण्डकी करिडोर, स्थानीय जनप्रतिनिधि र मुस्ताङ प्रशासनको रोहबरमा पुलको उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसअघि भदौ १ गते उद्घाटन गर्ने भनीएको पुल कालिगण्डकी नदी कटानका कारण स्थगित भएको थियो । बाढीले बन्दै गरेको पुलको आरसिसी पुल […]
बैंकका सहायक कम्पनिलाइ पनि तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिन भन्दै अगाडी आयो बैंकर संघ
मार्क्सवादि बिचारको बिषयमा बाबुराम र भीम रावल बीच आरोप प्रतारोप
शिवरात्रिको लागि पशुपतिमा विविन्नथरीका बाबाहरुको उपस्थिति ,
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री को राजीनामा स्वीकृत, सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा डा. युवराज खतिवडालाई
नेप्सेको दैनिक कारोबारमा इतिहासकै नयाँ रेकर्ड,
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाइ १ करोड ६० लाख कित्ता बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति ।